A-Stream - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > Baro + Dabagal > A-Flow
In our Heerka Koowaad ee Heerka Koowaad Marka lagu daro waxbarashada guud, waxaad bilaabi doontaa inaad ka shaqeyso mashaariicda STEM iyo Art & Dhaqanka. Waxa kale oo aad ka dooran kartaa Warbaahinta, Ciyaaraha, Bani-aadminnimada, Fikradaha, Dhaqaalaha iyo Naqshadaha Kala xulashada.
Gudaha STEM waxaan diirada saarnaa Xirfadaha qarniga ee XNIX. Maalinta maanta, tiknoolajiyada ayaa si dhaqsi ah u kobciya wakhtiga. STEM waxay u taagan tahay Sayniska, teknoolajiyadda, injineernimada iyo xisaabta. Afartaan waa mid si weyn loola xiriirin karo. Maaddaama aad tahay "hooyo dijitaal ah" waxaad ku tababartaa xirfadaha macluumaadka, hal abuur, hal-abuur iyo dhibaato farsamo, fekerka xisaabinta, iyo wax ka badan.
Gudaha Fanka iyo Dhaqanka waxaad ku baraneysaa waxbarasho farshaxan oo ballaaran iyada oo loo marayo mawduucyo xiiso leh. Waxaad baraneysaa inaad ogaato fursadahaaga hal abuurka ah iyo inaad sii horumariso. Adiga ayaa naftaada udub dhexaad u ah oo ku dhaqma dhaqankaaga is-wacyigalinta iyada oo loo marayo xirfadaha kala duwan ee dhaqanka (fikirka, ra'yiga, falanqeynta, fikradaha).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan habka aan u shaqeyneyno Barashada + Buuxi INFO Guud.
Sannadka labaad ee A-durdurku waad dooran kartaa LUUQADAHA XULASHADA Aasaasiga ah ee LUQADDA - SAYIDKA (dhagsii faahfaahin faahfaahsan)
Kala hadal halkan miisaska casharka ee noo Heerka Koowaad ee Heerka Koowaad:
Shaxda casharka 1A & 2A Xulashada aasaasiga ah Luuqadaha casriga ah - cilmiga (.pdf, 168 KB)
Miyaad weli ogtahay dabeecada aad rabto inaad raacdo? Miyaad rabtaa in aad sameyso noocyada kala duwan ee kala duwan ee suurtogalka ah si aad awood ugu yeelatid inaad doorato dookha waxbarasho ee saxda ah ee shahaadada 2e? Markaa jihadaasi waxay noqon kartaa wax adiga kuu ah!
Ma ku guulaysatay sanadka 2e? Markaas waxaad bilaabi kartaa mabda'a jihada kasta ee shahaadada 2e.
> Baro koorasyada shahaadada 2e ee dugsigeenna.
> Baro dhammaan koorsooyinka shahaadada 2e